Puntland oo shahaado sharaf kaheshay dowladda Maraykanka. – Radio Daljir
Puntland oo shahaado sharaf kaheshay dowladda Maraykanka.
Luulyo 30, 2016 9:14 g 0
Wasaaradda Arrimaha dibadda dalka Maraykanka ayaa shahaado sharaf guddoonsiisey Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada dawladda Puntland Deeq Saleebaan Yuusuf oo martiqaad rasmi ah oo uu ka helay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku joogey muddo ka badan 20 cisho.
Shahaado sharaftaan ayaa la xiriirtey kadib markii uu Agaasimuhu soo dhammaystay hawlihii shaqo ee uu u tegey dalkaasi isla markaana uu muujiyey firfircooni iyo hawl-karnimo dheeraad ah, isagoona ka soo qayb galay shirarkii xisbiyada dimuqraadiga iyo Republican-ka, si’ uu si dhow wax uga ogaado hannaanka doorashooyinka dalkaasi.
Agaasimuhu waxa uu ka mid ahaa labo qof oo Qaaradda Afrika uga qayb geleyey barnaamij loogu magac daray Hoggaamiyayaasha iyo siyaasiyiinta da’da yar oo sannadkiiba mar lagu qabto waddanka Maraykanka, kuwaas oo loogu talo galay in ay aqoon iyo waayo aragnimo la xiriirta dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka dalkaasi ay kasoo kororsadaan.
Sidoo kale Agaasimuhu muddadii uu ku sugnaa dalka Maraykanka waxa uu kulamo kala duwan la qaatay masuuliyiin kala duwan oo xilal ka haya dalkaasi, waxaana uu u sharraxay qaabka ay doonayso dawladda Puntland in ay uga gudubto hannaankii hore ee wax lagu soo dooran jirey iyo taageerada ay beesha caalamka uga baahan tahay, iyadoona ay masuuliyiintaasi u ballan qaadeen in ay Puntland ka caawin doonaan barnaamijyo badan oo dhaxal gal u ah shacabka reer Puntland.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida iyo Cabdifataax Cumar Geeddi.